Sidee Loogu Abuuraa Dadka Sirdoonka Artifishalka ah
Inicio/Sirdhaad dabiici ah/Sida loo abuuro dadka leh Sirdoonka Artificial
HackingSirdhaad dabiici ah
0 3.843 3 daqiiqo akhri
Waa macquul abuur dad aan jirin ?
Qoraalkan waxaan uga hadlaynaa shaqsigan tilmaamaha bixiya.
Aan aragno khataraha ay yeelan karto adoo adeegsanaya qalabkan.
Aan aragno sida aad u awooddo isku dar Hacking.
AI wuxuu marayaa jidkiisa, kiiskan waxaa loogu talagalay abuur dad leh Sirdoon Artifishal ah, sidaas lagu gaaro xaqiiqda cajiibka ah.
Kadib waxaan tijaabineynaa awoodahaaga garasho si aad u aragto inaad awood u leedahay inaad ogaato mid ka mid ah dadka soo socda oo aan jirin oo uu abuuray Sirdoonka Artifishalka.
Qof dhab ah mise Sirdoon Artifishal ah?
Labadooda keebaa qof been abuur ah?
Ma kuu sahlaneyd inaad kala soocdo qofka uu sameeyo caqliga macmalka ah?
Aan aragno haddii aad karti u leedahay waxyaabaha soo socda.
Tan waxaa laga yaabaa inay ka sahlan tahay. Ma cadahay?
Maxaad u maleyneysaa kuwan:
Ma ogaan kartaa?
Aynu raacno kuwii ugu dambeeyay. Kumaa ka mid ah oo aan ahayn qof dhab ah?
Haddii aad horey u qaadatay waqtiga lagama maarmaanka ah si aad isugu daydo inaad ogaato kuwa dhabta ah iyo kuwa aan ahayn, waxaad ogaan doontaa baaxadda iyo awoodda barnaamijkan sirdoonka macmalka ah. Waxaan rajeynayaa inaad sidoo kale ogaatay sida ay u adagtahay in laga fogaado jiritaanka aqoonsiyada beenta ah ee internetka, maadaama qofkasta oo ka mid ah dadkani uu been abuur yahay waxaana abuuray AI. Iyada oo leh koronto-dhaliyaha wejiga, DHAMMAAN.
Qofkani wuxuu ku siinayaa tilmaanta
Websaydhkani ma laha diiwaangelin, ma jiraan kontaroolo lagu doorto jinsiga, da'da ama wax la mid ah. Markasta oo aan dib-u-cusbooneysiinno bogga wuxuu ku tuurayaa milliseconds qof cusub oo uu abuuray caqli macmal ah.
Barnaamijku ma ahan mid la hagaajiyay boqolkiba boqol, waqti ka waqti wuxuu na tusayaa xoogaa natiijo ah oo aan si fiican ula jaanqaadi karin qof dhab ah, way ku filnaan doontaa in dib loo buuxiyo bogga oo la raadiyo midka xiga. Badanaa waa macquul macquul dhammaan iskudayada.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Farshaxanka waxaa abuuray Sirdoonka Artifishalka
Khataraha isticmaalista shaqsigan tilmaamaha.
Waan ka xumahay in aan jabiyay dhalanteedka ah in aan ogaado mid ka mid ah sawirada qof been abuur ah laakiin waxay ahayd lagama maarmaan inaad aragto heerka faahfaahinta taasi waxay maamushaa in lagu gaaro sirdoonka macmalka ah tan dhaliyaha wejiga aan jirin
Mashruucani waa mid laba sano jirsaday, waxaan arki doonaa ilaa heerka uu gaadhayo mustaqbalka marka lagu daro fiidiyowyada.
Qalabkan, qofku wuxuu iska dhigi karaa aqoonsiga BULSHADA internetka, tanna wuxuu ku abuuri karaa oo xitaa ku xaqiijin karaa astaamaha shabakadaha bulshada markii loo baahdo. Facebook wuxuu leeyahay nidaam lagu xaqiijiyo sawirka marka uu ka shakiyo in akoon uu leeyahay dabeecad shaki leh ama galitaan qariib ah. Citeia waxaan ku sameynay imtixaanka, wuuna ka gudbay shaandhada xaqiijinta facebook iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah aqoonsiyadaas. Qofka ku xeel dheer cilmiga tilmaanta wuxuu ku guuleystey inuu hareer maro AI.
Faahfaahintaan ayaa si buuxda u shaqeyneysa waxayna dhaaftay xaqiijinta sawirka.
Waqtigaan la joogo, ra'yiga caanka ah wuxuu inta badan ku xiran yahay internetka. Waxyaalaha noocan ah waxay ka dhigayaan "fikradda caanka ah" mid la qaadan karo. Waa la ogyahay in xitaa xisbiyada siyaasadu ay adeegsadaan bots si ay u kiciyaan falcelinta qoraaladooda sidaasna ay ku gaaraan kalsooni dheeri ah ama ay siiyaan sawir waafaqsan waxa ay sheegaan. Sidoo kale ma doonayo inaan u galo mawduuca in badan, waanu ka hadli doonaa Cilmu-nafsiga Mass hadhow. Waa la ogyahay in shirkadaha qaar iyaguna adeegsadaan. Helitaanka falcelinta iyo faallooyinka waxay ka dhigi doontaa dad badan inay aaminaan astaan. Sida haddii ay ahayd sharciga soo jiidashada, tiradu markay sii weynaato, ayaa xoogga badiya.
Sidee AI loogu dari karaa kan hacking?
Isku darka foofinta (Beenta) lagu daray Injineernimada bulshada, phishing ama Xploitz siin kara gelitaanka a hackkhaldan inaad weerar ku qaaddo shirkad ama isticmaale si fudud oo fudud.
Hadda markaan aragnay sida loo abuuro dadka leh Sirdoonka Artifishalka, maqaalka soo socda waxaad ku baran doontaa sida loogu daro qaababkan.
Waa macquul hackbini aadamka dhagta Injineernimada bulshada
sida dadka loo abuuro abuur dad been abuur ah abuur bani'aadam aan jirin abuur dad leh Sirdoon Artifishal ah abuur dad been abuur ah oo leh caqli macmal ah abuur dad AI been abuur ah abuur dad been abuur ah dhaliyaha wejiga aan jirin matoor wejiga tooska ah AI si loo abuuro aadanaha ia in dadka la abuuro caqli macmal ah si dadka loo abuuro dad been abuur ah oo leh AI dad aan jirin dad aan jirin waji been abuur ah iska dhigid shaqsigan ku sifeeya tilmaamaha khabiirkan takhasuska leh
Sida loo been abuurto Kaamerada Webka (Kaamirada Beenta ah)
Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka? [XALAY]
Dhexdeenna ayaa ku khiyaaneeya inay had iyo jeer noqdaan khayaano
Sidee HACKDHAGEYSO akoon Twitter [XAL AH]